Prison escapee Sam Muropa rearrested while attempting further robberies - Mbare Times
Home Crime and Courts Prison escapee Sam Muropa rearrested while attempting further robberies
Prison escapee Sam Muropa rearrested while attempting further robberies. In a statement on Wednesday evening, national police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi said Muropa was arrested after he had stolen a vehicle in Kuwadzana and was searching for a team to commit further robberies.
The Zimbabwe Republic Police (ZRP) has confirmed the arrest of the notorious robber and rapist, Sam Muropa (31), who escaped from Harare Remand Prison while on remand on 1 October.
The statement read: The Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of Sam Muropa (31) who escaped from Harare Remand Prison while on remand (in custody) on 1st October 2021.
On 5th October 2021, detectives received information that the suspect was driving an unregistered Toyota Wish searching for a team to commit further robberies. The detectives acted on the information and arrested the suspect in the Kuwadzana area in Harare.
Previous article14 armed robbers busted in Marondera
Next articlePepsi commissions a US$12m water bottling plant in Zimbabwe